ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ကလေးငယ်များ၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်များအားမေးမြန်းခြင်း - Xinhua News Agency
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ကလေးငယ်များ၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်များအားမေးမြန်းခြင်း
ပဋိပက္ခကြောင့်၊ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ထို့အပြင် အခြား အကြပ်အတည်းများကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ မကြုံစဖူးများပြားလှသည့် ပမာဏအဖြစ် ကလေးငယ်ပေါင်း ၃၆.၅ သန်း မှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြရပြီး ၎င်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း အများဆုံးပမာဏဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ယူနီဆက်) ၏ ထုတ်ပြန်မှုအရသိရသည်။
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့တွင် ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များက အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့သွားရောက်ကာ အဆိုပါနေရာများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသော မသေချာမရေရာသည့်အနာဂတ်ကိုစောင့်စားလျက်ရှိသော ကလေးငယ်များ၏အနာဂတ်စိတ်ကူးအိပ်မက်များအားမေးမြန်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Children in Mideast refugee camps share their dreams on World Refugee Day
An unprecedented 36.5 million children were displaced by conflict, violence and other crises by the end of 2021, the highest number since World War II, according to the UN Children’s Fund (UNICEF).
On World Refugee Day, follow Xinhua correspondents to Mideast refugee camps and see how children living there share their dreams as they await an uncertain future.
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တွင် လယ်သမားများအတွက် ဝင်ငွေတိုးပွားစေသည့် ဘဲမွေးမြူရေးခြံ